Zavatra mahatalanjona no ataon'ilay saka ho famohazana ireo tompony isa-maraina • Madagossip
il y a 1 année 1.4 K
Zavatra mahagaga no sady mahatsikaiky kely indray no andeha entitsika eto avy any ivelany any. Maro amintsika no kivy sy sosotra rehefa injay fa maneno ilay kiririoka fanairana maraina iny, satrintsika hanipy na hanatontona ny famataranandro na ny finday maneno satria dia tena mbola mamy ny torimaso. Fa ny fianakaviana misy an’i Boo kosa dia nahita vahaolana mahomby hialana amin’izany.
Ho azy ireo dia ireo biby fiompiny ao an-trano no manaitra azy isa-maraina. Tsy iza izany fa i Boo, ilay saka mahavita zavatra mahatalanjona. Tsy mila fanairana intsony izy ireo fa ilay saka Boo no efa tonga maraina mamoha amin’ny 5 ora amin’ny fomba hafa kely tsy takatrareo. Jereo amin’ity zohy iray ity ary ny fanaon’i Boo mba hamoazana ireo tompony.
Tena mahagaga sy hafa amin’ireo saka rehetra ny fomba fanaon’i Boo. Mahasondriana tsy takatry ny saina hoe ahoana no fahaizan’ity saka ity izao fomba fanairana hafa kely izao!
Tagsboo cat chat saka video